ငွေစက္ကူတွေကို ဘယ်အချိန်က စတင်အသုံးပြုခဲ့ကြလဲ? - True Money Myanmar
ငွေစက္ကူတွေကို ဘယ်အချိန်က စတင်အသုံးပြုခဲ့ကြလဲ?
ဘီစီ ၃၀၀၀ ကတည်းက ဆူမားရီးယန်းလူမျိုးတွေက ကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတွေကို မုယောစပါးတွေနဲ့ လဲလှည်အသုံးပြုနေရာကနေ သတ္တု ဒင်္ဂါးပြားတွေကို စတင်အသုံးပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ၇ ရာစုနှစ်ကစလို့ တရုတ်နိုင်ငံမှ ရွှေနဲ့ ငွေ ဒင်္ဂါးတွေကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုခဲ့ကြပေမယ့် ငွေကြေးဖောင်းပွမှုနဲ့ ဒေဝါလီခံရမယ့်အခြေအနေတွေကြောင့် ငွေစက္ကူတွေကို စတင်အသုံးပြုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။
စက္ကူပိုက်ဆံရဲ့ အသားကိုတော့ သင့်တော်တဲ့ ခံစားမှု အထိအတွေ့ကိုရစေဖို့ ချည် ၇၅ ရာခိုင်နှုန်း လီနင် ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းပါဝင် အသုံးပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ အသေးစိတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ အနီရောင်နဲ့ အပြာရောင် အမျှင်အများအပြားကို ငွေကြေးလုံခြုံရေးအတွက် ထည့်သွင်းထားကြပါတယ်။
ပိုက်ဆံတွေကို ရိုက်နှိပ်တဲ့ မှင်ကိုတော့ စျေးကွက်အတွင်းလက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့ ပုံနှိပ်စက်တွေနဲ့ ထုတ်ယူလို့မရတဲ့ မှင်တစ်မျိုးနဲ့ ရိုက်နှိပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဖောင်းကြွစာလုံးတွေဖြစ်နေစေဖို့ မှင်အထူစားတွေကို အသုံးပြုထားပြီး အရောင်ကျွတ်ခြင်းတွေကို ကာကွယ်နိုင်ဖို့အတွက် ဆီဆေးနဲ့ ရေးဆေးနဲ့ ရောယှက်ထားတဲ့ မှင်တစ်မျိုးကိုအသုံးပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။
ငွေကြးလုံခြုံမှုအတွက် ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်လောက်မှာ လုံခြုံရေးကြိုးတွေကို ပိုက်ဆံတွေရဲ့ ရှေ့မျက်နှာခြမ်းနဲ့ အနောက်မျက်နှာခြမ်းကြားတွေမှာ ထည့်သွင်းအသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။ ပထမဦးဆုံး လုံခြုံရေးကြိုးတွေကိုတော့ ၁၉၉၀ ခုနှစ်မှာ ၁၀ ဒေါ်လာနဲ့ အထက် ငွေကြေးစက္ကူတွေမှာ စတင်အသုံးပြုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။
တခြား သိချင်စဖွယ်အကြောင်းအရာတွေကိုလည်း ဝေမျှပေးဦးမှာမို့ TrueMoney Facebook Page ကို Like လုပ်ထားလိုက်ပါဦးနော်…
နိုင်ငံတစ်ကာ ‌ငွေလွှဲထုတ်ယူနိုင်သော TrueMoney ကိုယ်စားလှယ်များ